Dr, Nawa Raj Subba - Part 4
February 25, 2019 nrsubba
लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न मेसिन वितरण भएको समाचार एक अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित छ (Our Biratnagar, 2019) । लामखुट्टेको टोकाईबाट बच्नलाई हो वा लामखुट्टेबाट सर्ने रोगबाट बच्नको लागि मेसिनको व्यवस्था भएको भन्ने कुरा समाचारमा स्पष्ट छैन । ३० थान फगिङ मेशीन वितरण गरिएको छ । विरानगरलाई ६ थान, बेलबारीलाई ३ थान तथा गाउपालिकालाई २ थानका दरले वितरण भएको देखेर यो पङतिकार अचम्ममा परेको छ । हिजो आफू जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा रहँदाको एउटा अनुभव बाँड्न खोज्दैछु । उसबेला मोरङमा जम्मा २ थान फगिङ मेसिन थिए । त्यसले पूर्वाञ्चलका तराई जिल्ला मात्र हैन धनुषासम्मलाई धान्दथ्यो । चितौनमा भएको डेंगु महामारीमा समेत मोरङले फगिङ मेशिन र प्राविधिक सहयोग दिएको थियो । गाउँ–गाउँमा औलो प्रभावित क्षेत्रमा विषादी छिट्काउलाई लामखुट्टे मार्ने अभियान सम्झने र बुझ्नेहरुले विभिन्न दलका नेताहरु मार्फत यता पनि उता पनि छिट्काउ गरिदिनोस् भन्दथे, कहिले आएर लामखुट्टेले धेरै दुःख दियो यहाँ आएर धुँवा उडाइदेऊ भन्दथे । तर विरामीको तथ्यांक, विषादी छिट्काउ र फगिङको फायदा, वेफाइदा, निर्देशिका र मापदण्ड सम्झाइबुझाइ गरेर चित्त बुझाउन उसबेला हामीलाई हम्मेहम्मे पर्दथ्यो । चित्त बुझाएजस्तो गरे पनि कतिपयद्वारा काम नगरिदिएको वा आलटाल गरेको आदि आक्षेप पनि लगाएन्थ्यो । विराटनगर महानगरपालिकामा पनि उसबेला फगिङको उत्तिकै जनदवाव आउँथ्यो । नगरपालिका व्यवस्थापनले पनि धेरै दवावको सामना गर्नुपर्दथ्यो र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङको सहयोगमा एकाध फगिङ गर्ने गर्दथ्यो । आज अचम्म छ, विराटनगर महानगरपालिकाले पाएका ६ मेसिन विभिन्न ६ वडामा भागबण्डा गरेको समाचारले बुझिन्छ । यति सानो नगरक्षेत्रमा भोली आवश्यक पर्दा जुनसुकै वडामा पनि मेसिन प्रयोग केन्द्र वा पालिकाबाटै गर्न सकिन्थ्यो । यसबाट थाहा हुन्छ कि राजनीतिक भागवण्डाको नेपाली संस्कार अब जनस्वास्थ्य कार्यक्रममा पनि अभ्यास हुन थालेका छन् । जेहोस्, अब त सबैका हातमा पर्याप्त मेसिन पुगेका छन् । यसैले फगिङ, मेसिन र यसका काम, असर तथा संभावित जोखिमबारे केही जानकारी बाँड्ने जमर्को गर्दैछु, ताकि भोलिको दिनमा फगिङ मेशिन भोट मेसिन नबनोस् ।
Continue reading फगिङ मेसिन भोट मेसिन नबनोस् →
February 17, 2019 nrsubba
आदिवासी लिम्बू जाति प्राचीनकालदेखि आर्यसंग संसर्गमा रहेर पनि किन हिन्दू धर्मसित विकर्षित भयो भन्ने सवाल इतिहासले बेलाबेला उठाउँछ र जवाफ पनि इतिहासभित्रै खोज्न लगाउँछ । आर्य धर्मग्रन्थमा ‘किरात’ शब्द प्रयोग गरियो भनेर वर्तमानमा यो शब्दप्रति नै वितृष्णाको मनोविज्ञान एकथरीमा चलायमान छ । जबकि सिन्धुमा आर्य आउनअघि सिन्धुघाँटीमा अवस्थित महञ्जोदरो र हरप्पा सभ्यताका उत्खननमा शिवको चिन्ह पशु, त्रिशूल आदिको प्रयोग भएको प्रमाण फेला परेको छ (शास्त्री, वि.स. २०६४) । कालान्तरमा भगवान शिवको जीवन-दर्शन र अन्तरनिहित शक्ति देखेरअसुरदेव वा किरातेश्वरलाई हिन्दूधर्मले अघोरी मान्दामान्दै पनि हिन्दूका आराध्य त्रि-देव मध्ये एक मानेको छ । यही शिवलाई किरातले थेबासाम, पारुहाङ, किरातेश्वर आदि नामले पूज्ने गरेको पाइन्छ । यद्यपि आर्यले किरातका लिम्बूका थेबासाम, पारुहाङलाई किरातेश्वर महादेव भनेर मान्यता दिएता पनि किरात लिम्बू आफूलाई हिन्दू मान्न चाहँदैन । आदिवासी किरातका पशुपति लगायतका देवस्थल र देवी-देवतालाई आर्यले हिन्दूकरण गरिदिए पनि किरात लिम्बू आफूलाई हिन्दू वा आर्य मान्दैन (थुलुङ, वि.स. २०४२) । उवाहाङले किरात ऋग्वेदको प्रचार गरे (चेमजोङ, वि.स. २०५९ ) । किरात दशैंमा मासु खान्छ, मीठोमसिनो खान्छ, लुगाफाटा फेर्छ, भेटघाट गर्छ तर पनि हिन्दूले झैं रातो टीका लगाएर गौरव गर्दैनन्, सवाल विचारणीय छ ।
यो आलेखको उद्देश्य पौराणिक तथा ऐतिहासिक तथ्यहरुको आधारमा आर्य सभ्यता र संस्कृतिले किरात लिम्बू संस्कृतिको सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा एवम् यस जातिको मनोविज्ञानमा के कस्तो प्रभाव कहिले कसरी पर्न गयो भन्ने अध्ययन हो । हिन्दू धर्मको एक पवित्र चिन्ह जनैको अवमूल्यन गर्ने वा अनास्था पैदा गर्ने वा कुनै धर्मावलम्बीको धार्मिक, साँस्कृतिक मूल्य र मान्यतालाई चोट पुर्याउने अभिप्राय होइन । यो एक विशुद्ध प्राज्ञिक र वौद्धिक मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेर लेख्ने अभ्यास वा प्रयास मात्र हो । विभिन्न विद्वानहरुका ग्रन्थहरुलाई यसमा आधार मानिएको छ ।
Continue reading किन फालिए तम्बरखोलामा जनैका ढाकर →
Continue reading कोशी बराहक्षेत्र साँबा लिम्बूको मुन्धुमी तुङदुङ्गे देवस्थल →